Cufflinks & Tie Mabhawa Fekitori - China Cufflinks & Tie Mabhawa Vagadziri uye Vatengesi
Kupfeka kunonakidza kunofanirwa kuve pamwe necufflink yakasarudzika kana tayi bar. Izvo zvakanaka zvakanaka zvipo zvezuva raBaba, kupedza chikoro, zuva rekuzvarwa, zuva rekuzvarwa, muchato kana chero nezve chero chipo chinopa chero chiitiko chevarume. Mushandisi anogona kuisa macufflinks pamasutu, shati kana mbatya dzakarongeka zvezuva nezuva kana chero chiitiko chekushandisa, nepo imwe pc tayi bar ichifanira kunge iri yekuunganidzwa kwemurume wese. Akanaka Shiny Zvipo ane makore makumi matatu neshanu 'ruzivo mukugadzira akawanda epamusoro macufflinks uye tayi mabara, masitaira anogona kunge ari echinyakare, mafashoni, emhando yepamusoro, akapusa sezvaunoda. Yedu yekupaka maitiro uye kuzadza kwemavara kunozoita kuti chinhu chacho 'kupenya chigare, uyezve, nyowani nyowani anozivikanwa akavhurwa magadzirirwo anowanikwa iwe kuti usarudze. Magadzirirwo: ● Vhura magadzirirwo esarudzo ● Chimiro, zvinhu, saizi, mavara akagadziridzwa ● Ruvara: chigadziko nekupenda, pamusoro nekupenda, kuzadza kwemavara, kudhinda ● Logo: Kutema, Kukanda, Mufananidzo wakatemwa, Wakatemwa, wakadhindwa, epoxy chinamirwa. ● Pasuru: 1pcs / poly bhegi, chipo bhokisi kurongedza kunowanikwa kana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Luxury & Yakashongedzwa Cufflink